၀တယ်ကို မရှိဘူး ကိုထွန်းလူတို့ မြို့တက်တိုင်း မစန်းစန်းနှင့် ပြူးကျယ်တို့က ချိန်းချိန်း လိုးနေကျ ဖြစ်သည်..။ အိမ်ချင်းကလည်း တောင်ဖက်မြောက်ဖက် ကပ်လျက်သားဆိုတော့ သူတို့နှစ်ယောက် ဖြစ်နေကြသည်ကို မည်သူမျှ မရိပ်မိကြ..။ ပြီးတော့ သူတို့နှစ်ယောက် အသက်ချင်းကလည်း အလွန်ကွာသည်..။ ပြူးကျယ်အသက်က အခုမှ ၁၈ နှစ်ထဲ ဝင်စ..။ မစန်းစန်း အသက်က ၃၆ နှစ် ရှိပြီမို့ ပြူးကျယ်ထက် ၁၈ နှစ်ခန့် ကြီးသည်..။ လမွှေးလေးတွေ က ရေးတေးတေးပေါက်လာပြီ ဖြစ်၍ ပြူးကျယ်တစ်ယောက် လူပျို အတောင်အလက်လေးတွေ ထလာပြီ..။ လူပျိုကြီး ကိုမောင်ရှိန် သင်ကြားပြသထားသဖြင့် ဂွင်းလည်း တိုက်တတ်နေပြီ..။ ကိုမောင်ရှိန်က သူ့အဖေနှင့် ညီအစ်ကို တစ်ဝမ်းကွဲမို့ ဦးလေးဝမ်းကွဲ တော်စပ်သည်..။ သို့သော် ကိုမောင်ရှိန်က… Continue reading ၀တယ်ကို မရှိဘူး
Categorized as အင်းဆက် Tagged ၀တယ်ကို မရှိဘူး
ရှင့်ကြောင့် ရှင့်ကြောင့် ကျနော်ဆယ်တန်းလောက်က အမေကအိမ်မှာထမင်းချက်အဝတ်လျှော်လုပ်ပေးဖို့ ရပ်ကွက်ထဲက အဒေါ်ကြီးတစ်ယောက်ကို အကူအညီတောင်းလိုက်တယ် ပိုက်ဆံချေးငှါးထားတော့ လာကူလုပ်ပေးတယ် အိမ်ဖော်တော့မဟုတ်ဘူး အမေနဲ့အဖေကဈေးထဲမှာ ကုန်ခြောက်ရောင်းတော့ မနက်သွား ညနေပြန်နဲ့ အိမ်ကိစ္စလှည့်မကြည့်နိုင်ဘူး ကျနော့်အမတွေက တက္ကသိုလ်တက်နေကြပြီ အိမ်မှာကျနော်တစ်ယောက်တည်းပေါ့ စာလုပ်တာနဲ့အချိန်ကုန်နေတာပဲ အဲဒိအဒေါ်ကြီးရောက်လာတော့ …အဒေါ်ကြီးနာမည်က ဒေါ်မြင့်ရီ တစ်ရက်တစ်ရက်နဲ့ရင်းနှီးလာတော့ စကားပြောတာတွေက ပွင့်လင်းလာတယ် “ကောင်လေးက လူပျိုလေးဆိုပြီး အတော်ညစ်ပတ်တာပဲ အတွင်းခံဘောင်းဘီတွေကနံဟောင်နေတာပဲ” တဲ့ “ဒေါ်ကြီးနမ်းကြည့်လို့လား” “အေးပေါ့” “ဒေါ်ကြီးဘောင်းဘီကြတော့ရော” “ငါက အတွင်းခံမဝတ်ဘူးဟဲ့” “အတွင်းခံမဝတ်ရင် အောက်စလွတ်တော့ ပေါ်မှာပေါ့” “ပေါ်ပါစေ” အဲ့လို့ ကျနော်တို့အပြောအဆို တခါတလေကျတော့ “ကောင်လေးငါ့လက်မှာဆပ်ပြာတွေနဲ့မို့ ကျောကုန်းထဲဘာဝင်သွားလည်းမသိဘူး “ဆိုပြီးကြည့်ခိုင်းတယ် ဝတယ်ဆိုပေမဲ့ အဆီမရှိ အသားတွေကတင်းရင်းနေတာပဲ ကျနော်လည်းဟိုပွတ်ဒီပွတ်လုပ်ရင်း တင်ပါးကြီးတွေကိုကိုငိခြင်လာမိတဲ့အထိလစိတ်ပြောင်းလာတယ် တရက်တော့ သူ့ယောကျ်ားအကြောင်းပြောနေတယ် “အိမ်ကမသာ စောက်ပတ်ရေတွေသောက်လာလို့ ငါဒီညအိမ်ပြန်မအိပ်ဘူး”လို့ပြောခဲ့တယ်… Continue reading ရှင့်ကြောင့် ရှင့်ကြောင့်
Categorized as အင်းဆက် Tagged ရှင့်ကြောင့် ရှင့်ကြောင့်
ထန်တယ်ဆိုတာ ဒီလိုမျိုး ကိုနဲ့ ကျမက ချစ်သူဘဝမှာ အသန့်ရှင်းဆုံး နေခဲ့ကြတော့ ဆက်စ်ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိခဲ့ဘူး…ကို ကကျမထက်အသက်၂နှစ်ပိုကြီးတယ် ကျမပထမနှစ်မှာ သူကတတိယနှစ်ရောက်နေပီလေ…သူကျောင်းပီးတော့ တာချီလိတ်နဲ့ ရန်ကုန်ကို ကုန်ကူးပီး ကျမတို့ မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ ပေါင်းဆုံဖို့ စီးပွားရေးကို စောက်ချလုပ်ခဲ့တယ်…ကျမတို့ မင်္ဂလာဆောင်တော့ ကျမလေ ပျော်လည်းပျော် ကြည်လည်းကြည်နူးသလို ရင်တွေလည်းခုန်ခဲ့ရပါတယ်…ဒီလိုနဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ပီး လမ်းမတော်က ကို့ရဲ့တိုက်ခန်းလေးကို ၂ယောက်သား ပြန်လာတော့ ဒုတိယထပ်မှာရှိတဲ့ ကို့ရဲ့အခန်းကို တက်ဖို့အတွက် လှေကားမှာ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ရွှေကြိုးအထပ်ထပ်ကို ရင်ခုန်စွာဖြတ်သန်းခဲ့ကြတယ်… အဲ့နောက် အခန်းကို ဖွင့်လိုက်ပီး အခန်းထဲရောက်တော့ သေသပ်စွာပြင်ဆင်ထားတဲ့ ဧည့်ခန်းလေးကို ကြည်နူးစွာကြည့်နေတုန်း ဗြုန်းခနဲကိုက ပွေ့ချီလိုက်လို့ ကျမလန့်သွားပီး ကို့လည်ပင်းကိုလှမ်းဖက်ပီး အရှက်သည်းစွာ ကို့ရင်ခွင်ထဲ ခေါင်းလေးဖွက်ရင်း ကိုပွေ့ချီရာ အိပ်ခန်းထဲပါလာပါတယ်…အဲ့နောက်ကိုက လှပစွာခင်းကျင်းထားတဲ့ မင်္ဂလာကုတင်ပေါ်… Continue reading ထန်တယ်ဆိုတာ ဒီလိုမျိုး
Categorized as အင်းဆက် Tagged ထန်တယ်ဆိုတာ ဒီလိုမျိုး
သဘောကောင်းတဲ့ ညီမ သူမနာမည်က ‘စန်းစန်းခင်’အသက် ၁၉ ကျော်လို့ ၂၀ ပြည့်တော့မယ် တောသူဆိုတော့ လုံးကြီးပေါက်လှပေါခါးသေးရင်ချီဖင်လုံးကြီးကြီး…နို့အုံထွားထွားပေါ့…ရွာကာလသားတွေအကြိုက်ပေါ့ အမေတစ်ခုသမီးတစ်ခု..သူကတော့ ဘယ်ကာလသားမှစိတ်မဝင်စားဘူးသူသိတာက ‘စနေ’သူနာမည်ကတော့ ‘စနေ’ လို့ခေါ်ပါတယ် မိသားစုတော့မရှိတော့ဘူး အသက် ၂၅ ငယ်ငယ်ထဲကမိဘတွေဆုံးပါးသွားပြီ စနေဆိုရင်တစ်ရွာလုံးကကြောက်တယ်သူကမဟုတ်မခံလေ.. သူဟာသူတစ်ယောက်ထဲနေတယ် ဘယ်သူနဲ့မှမရောဘူး သူကိုစောက်ပြဿနာလာရှာရင်တော့ အဲ့ကောင်ဘဝကိုတော့မတွေးဝန့်စရာ သူကရွာအကြီးအကဲသူကြီးကိုတောင် သိပ်ဂရုမစိုက်ဘူး သူကြီးကလဲသူကိုသိပ်မဟုတ်ပဲနဲ့မစွတ်ဆွဲဘူးပေါ့ သူကြီးပါရှိန်ရတဲ့သူ သူအလုပ်ကတောတက်အမဲလိုက်တဲ့မုတ်ဆိုးလေးပေါ့…“ကိုမဲကြီးထန်ရည်တစ်မြူချဗျာ” ”ဟ..စနေပါလားကွ..မင်းဒီနေ့တောမလယ်ဘူးလား””အခုမှ တောကပြန်ထွက်လာတာကိုမဲကြီးရေ””စကားမများနဲ့ဗျာထန်းတစ်မြူသာအရင်ချပေး””အေးအေး..အေးပါစနေရာ.. အမြီးရောဘာစားမလဲ..””ငရံခြောက်ဖုတ်ရှိရင်ချဗျာ”ခဏနေတော့ မဲကြီး ထန်းတစ်မြူနဲ့ငရံခြောက်ပန်းကန်လာချပေးတယ်… “ကိုမဲကြီးခဏ.””ဘာလဲကွစနေရ..ဘာလိုသေးလို့လဲ””ဘာမှမလိုဘူး ကျုပ်မှာပိုက်ဆံမပါဘူး””ဟေ..””ဘာမှမဟေနဲ့ ရော့ဒီ ဆက်သား တစ်တွဲ””ထရည်ဖိုးနဲ့အမြီးအထွက် ဒီဆက်တစ်တွဲယူလိုက်”ပြောပြီး စနေတစ်ယောက် သူလွယ်လာတဲ့နှီးပလိုင်းထဲကဆက်တစ်တွဲထုတ်ပေးလိုက်တယ်”အော်အဆင်ပြေတာပေါ့ကွာစနေကလဲ မင်းအရင်လဲဒီအတိုင်းလဲသောက်နေကြပဲ မင်းထရည်လိုရင်ပြော ငါနောက်တစ်မြူ ချပေးမယ်” စနေလဲထရည်နှစ်မြူလောက်သောက်ပြီးပြန်မယ်အလုပ်..” ဟ..စနေပြန်တော့မှာလား””ခဗျားဘာလုပ်မို့လဲ””မင်းကိုပြောစာရှိလို့ ဒေါ်မိစိန်မကိုမင်းသိတယ်မလား”“သိတယ်လေအဲ့တာဘာဖြစ်လဲ”စနေလေသံမာမာနဲ့ပြောလိုက်တော့မဲကြီးလဲ လေရှည်နေလို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာသိလိုက်တယ်..” ဟို..ဟို.ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွာ.. မိစိန်မတို့ယာတောဝိုင်းနောက်ကို ယုန်တွေစားကျက် ဆင်းလာတယ်တဲ့” “ဟ..ခဗျားစောက်ပိုမပြောနဲ့… Continue reading သဘောကောင်းတဲ့ ညီမ
Categorized as အင်းဆက် Tagged သဘောကောင်းတဲ့ ညီမ
လာမယ်ဆို စောင့်လျှက်ပါပဲရှင် အ … ကျွတ် ကျွတ် ” ” ဟင် … ကိုရဲနိုင် … ရလား … အိမ်သာသွားချင်တာလား ” ” အင်း … မမိုး ” ကျနော်လည်း လူနာကုတင်ပေါ်ကနေ အောက်ဆင်းတော့ ကျနော့်မိန်းမ မိုးမိုးလွင်က ကူတွဲပေးပါတယ်။အိမ်သာ သွားပြီး ပြန်လာတော့ ည၁၁ခွဲပြီ။ရေငတ်တာနဲ့ မမိုးကို ရေဘူးယူခိုင်းရတယ်။ရေကလည်း အဝမသောက်ရဘူးဗျ ဆရာဝန်က မှာထားလို့။ရေတစ်ငုံလောက်ပဲ မော့သောက်ပြီးမှ ကုတင်ပေါ်ပြန်တက်ပြီး မှေးနေလိုက်တာ။ကျနော့်နာမည် ရဲနိုင်ပါ ကားမောင်းတယ်ဗျာ။ကားသမားဆိုတော့ အသောက်အစားမကင်းတာပေါ့။အသက်က ၄၀ကျော်ပါ။ကျနော့်မိန်းမ မိုးမိုးလွင်က စတိုးဆိုင်တစ်ခုမှာ အရောင်းစာရေးပါ။အသက်က ၃၅နှစ်ဆိုတော့ ကျနော့်ထက် ၅နှစ်ငယ်ပါတယ်။ကလေးတော့ မရှိဘူးဗျ။သူကလိုတာလား ကျနော်က လိုတာလား စစ်မကြည့်ဖြစ်ကြဘူး။ အိမ်ထောင်သက် ၄နှစ်ကျော်တော့ ကျနော်ဆိုးခဲ့တဲ့… Continue reading လာမယ်ဆို စောင့်လျှက်ပါပဲရှင်
Categorized as အင်းဆက် Tagged လာမယ်ဆို စောင့်လျှက်ပါပဲရှင်
ချောကလက် မာယာ ကလင် ကလင် ကလင်…. စက်ဘီးဘဲလ်သံကြားလို့ ဒေါ်ကျော့ခိုင်ခေါင်းလေးမော့ကြည့်မိသည်။ “အန်တီရေ ဇွဲမာန်ရှိလား” “ရှိတယ် သမီးရေ အပေါ်ထပ်မှာ ပစ္စည်းတွေထည့်နေတယ် သားရေ အောက်ဆင်းခဲ့ဦး ဒီမှာ အေးမြလေး ရောက်နေတယ်” “ဟုတ် လာပြီ အမေရေ” အမေ့ကို အသံလှမ်းပြုရင်း စာအုပ်တချို့ကို သေတ္တာထဲထည့်ပြီး အောက်ထပ်သို့ဆင်းလာခဲ့သည်။ “အေးမြ ထူးထူးဆန်းဆန်း ဘာလဲဟ” “နင်မနက်ဖန်ကျောင်းသွားတော့မှာလေ အဲ့ဒါငါ့ကို မုန့်လိုက်ကျွေးဦး” “ဟာ…နင်ကလည်း ပစ္စည်းတွေသိမ်းလို့မပြီးသေးဘူးဟ” “လာပါဟာ ငါလွမ်းနေရမှာ ခဏလေး တနေရာသွားထိုင်ရအောင်ဟာနော် လာပါ ဇွဲမာန်ရာ” ချစ်သူရဲ့ အသံတိမ်ဝင်သွားပြီး မျက်ရည်လေးတွေဝိုင်းလာတော့ ကျနော်လည်း မနေနိုင်တော့ပြီ။ “အမေရေ သား အေးမြနဲ့ အပြင်ခဏသွားဦးမယ် ” “အေး အေး အရမ်းမကြာနဲ့နော် လုပ်စရာတွေရှိသေးတယ်” “ဟုတ်… Continue reading ချောကလက် မာယာ
Categorized as အင်းဆက် Tagged ချောကလက် မာယာ
အိမ်တုန်အောင် ဆူတဲ့ည လယ်ပိုင ်ရှင် ကြီး ဦးတင် ရဲ့ အလုပ်သမား။ အသက် ၁၈ ပြည့်ပြီ။မိဘ ဆွေမျိုးမရှိ သော တ ကောင်ကြွက်။ ရွယ်တူကောင် မ လေးတွေက သူ့ကို စိတ်မဝင် စား။သူကလည်း အနိမ့်စားမို့ ဘယ်သူ့မှ မမှန်းဝံ့။ သို့သော် အချိန်တန်တော့ သဘာဝဟာ သဘာဝ ပါ။သူ ဗွီဒီယို အပြာကားကြည့်ချင် သည်။ကြိုက်သည်။ မြို့ပြန် တက်ကသိုလ်ကျောင်းသား ကိုကိုအောင် က ဖုန်းထဲက ကားတွေသူ့ကိုပြသည်။ သူက ကို အောင့် အတွက် အရက် သွားဝယ်ပေးရ သည်။ အိုကေ ပေါ့။ သည်လိုနဲ့ သူ လက်တွေ့လုပ်ချင် လာသည်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရွာမှာ ဖာသည် မရှိ။… Continue reading အိမ်တုန်အောင် ဆူတဲ့ည
Categorized as အင်းဆက် Tagged အိမ်တုန်အောင် ဆူတဲ့ည
ကျွန်တော် လောင်ကီးပါ ကျွန်တော့် နာမည်က… ငပဲ။လိင်တန်ဆာ ဆိုရင်လဲမမှားဘူးပေါ့။ဒါပေမယ့် လီးလို့လဲ ခေါ်ကြပြန်တယ်။ နောက်ထပ်လဲ အခေါ်အဝေါ် လေးငါးဆယ်မကရှိပါသေးတယ်။ခင်ဗျားတို့ ကြိုက်သလို လွတ်လပ်စွာ တင်စားပြီး ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော် စိတ်မဆိုးဘူး။ကျွန်တော်က တော်တော် စရိုက်ကျတဲ့ကောင်ဗျ။ နဲနဲလဲ ကြွစောင်းစောင်းနိုင်တယ်။ဒါမို့ ငပဲဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံးလို့ထင်တာပဲ။ကျွန်တော့် ဘော့စ်ရဲ့နာမည်က မောင်ဟိတ် ။ သူက နုဆိုတဲ့ ကောင်မလေးနဲ့ လက်ထပ်ထားတယ်။ ကျွန်တော့်ကို ဘဝတစ်လျောက်လုံး အကြိမ်ကြိမ် ရိုက်နှက်ခဲ့ပေမယ့် ဘော့စ်နဲ့ ကျွန်တော် လက်တွဲမဖြုတ်ခဲ့ပါဘူး။ ဘော့စ်ကို ကျွန်တော် ခွင့်လွှတ်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘော့စ်နဲ့ကျွန်တော်က အခက်အခဲမျိုးစုံကို နှစ်ပေါင်းများစွာ အတူရင်ဆိုင် ဖြတ်ကျော်ခဲ့ကြတဲ့ ရဲဘော်ရဲဘက်တွေမဟုတ်လား။ကျွန်တော်မှာမျက်လုံးတစ်လုံးပဲပါလို့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတော့သိပ်မမြင်ရဘူး။ ဒါပေမယ့် တော်တော် ခန့်ညားတဲ့ကောင်မှန်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ သိနေတယ်။ကျွန်တော့်မှာကျစ်လစ်မာကျော ချွန်ထက်တဲ့ ခေါင်းရှိတယ်။ လည်ပင်းက… Continue reading ကျွန်တော် လောင်ကီးပါ
Categorized as အင်းဆက် Tagged ကျွန်တော် လောင်ကီးပါ
မြူရဲ့ မိုက်ပြစ် မိုက်ဒဏ်
မြူရဲ့ မိုက်ပြစ် မိုက်ဒဏ် အားးး..သားး.. သားးး…. ဘာဖွဈတာလဲ ဟင် သား ဘာဖြစ်လို့လည်းးးး.. ဘွားလေး အိပ်မက်တွေ မက်ပြီး ထအော်ပြန်ပြီလား သား ပြန်အိပ်လိုက်အုံးနော် မနက်အလုပ်သွားရအုံးမယ် မဟုတ်လား သား ဟုတ်ကဲ့ ဘွားလေး သား ရေသောက်ပြီး ပြန်အိပ်လိုက်ပါ့မယ် ဘွားလေးလည်း သားကြောင့် အိပ်ရေးပျက်သွားပြီ ဘွားလေးလည်း အိပ်တော့နော် သားလည်းအိပ်ပြီနော် ဘွားလေး ဘွားလေး အိပ်ယာထဲပြန်ဝင်သွားတော့မှ ကျနော်လည်း ကြမ်းပြင်ကအိပ်ယာပေါ်လှဲချလိုက်ပြီး ခြင်တောင်ကိုပြန်ချရင်း နဖူးပေါ်လက်တင်ရင်း အသိစိတ်ကလွင့်ပျံ့နေရင်း အတိတ်က ပုံရိပ်တစ်ချို့မျက်စိထဲပြန်မြင်ယောင်လာမိပါတော့တယ်.. သား လင်းခန့် ဗျာ အမေ ဘာပြောမလို့လည်း သားအိပ်တော့မလို့ မနက်အလုပ်ဆင်းရအုံးမှာ အမေရယ် ခဏလေးပါ သားရယ် ကျနော် အိပ်ယာကလူးလဲထလိုက်ပြီး အမေ့ပါးနှစ်ဖက်ကိုဖျစ်ညစ်လိုက်ရင်း ပြော အမေ အသက်ပဲ… Continue reading မြူရဲ့ မိုက်ပြစ် မိုက်ဒဏ်
Categorized as အင်းဆက် Tagged မြူရဲ့ မိုက်ပြစ် မိုက်ဒဏ်
အသေဖက်တွယ်တဲ့ မေသက်နွယ် (စ/ဆုံး) “နွယ်….. ဒီနေ့ည အတွင်းခံတွေ မဝတ်ခဲ့နဲ့နော် မောင်ဒီတိုင်းလေးမြင်ခြင်လို့” “ဟာ…. မောင်ကလဲကွာ နွယ်ဒီတိုင်းကြီးမနေရဲပါဘူး” “လုပ်ပါကွာ မောင့်မိန်းမက ဘယ်လောက်လှလဲဆိုတာ လူတွေကြည့်ရအောင်” “မောင် အရမ်းမကဲနဲ့ကွာ ဟိုဘက်ဝိုင်းကလူတွေက နွယ့်ကိုကြည့်နေကြပြီး” “ကြည့်ပစေပေါ့ကွာ မောင့်မိန်းမကို လှလို့ကြည့်တာပဲဟာ” “သူတို့က နွယ့်အောက်ပိုင်းကိုကြည့်တာကွ မောင်လက်ခဏဖယ်ဦး” ထိုခါမှ ရဲရင့်ဦးလဲ မေသက်နွယ် စောက်စီလေးကို ပွတ်ကာပေးလိုက်သည်။ မေသက်နွယ်ကတော့ ရဲရင့်ဦးလက်မောင်းလေးကိုကိုင်ကာ ခေါင်းကိုငုံ့ထားသည်။ မေသက်နွယ်လဲ စောက်စိကို ပွတ်ပေးနေခြင်းကြောင့် သတိလွတ်ကာ ပေါင်ကိုကားပေးမိလိုက်သည်။ စားပွဲထိုးလေး စားသောက်စရာတွေလာချမှ ရဲရင့်ဦးလည်း ဖယ်ပေးလိုက်သည်။ မေသက်နွယ်မျက်နာလေးကိုကြည့်လိုက်တော့ ရမက်စိတ်များနှင့် မျက်နာလေးပါရဲနေတော့သည်။ ရဲရင့်ဦးနဲ့မေသက်နွယ်လဲ စားသောက်စရာရှိတျိားကို စားသောက်လိုက်ကြသည်။ ရဲရင့်ဦးက မေသက်နွယ်ကို အချိုရည်ထဲတွင် အရက်ထည့်ကာ တိုက်လိုက်သည်။ “သက်နွယ် မောင်တို့ဒီည… Continue reading အသေဖက်တွယ်တဲ့ မေသက်နွယ်
Categorized as အင်းဆက် Tagged အသေဖက်တွယ်တဲ့ မေသက်နွယ်